निको भइसकेकामा पुनः किन देखिइरहेको छ कोरोना संक्रमण ? – Online Nuwakot
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ निको भइसकेकामा पुनः किन देखिइरहेको छ कोरोना संक्रमण ?
अनलाइन नुवाकोट वैशाख २१ २०७७, आईतबार २०:१४
कोरोना भाइरस उत्पत्तिबारे अनेक विषय प्रकाशमा आइरहेका बेला उनले प्राकृतिक रूपमा कोरोना भाइरस निस्किएको जिकिर गरिन् । चमेराबाट मानिसमा कोरोना भाइरस उनको मत छ । यद्यपि, चमेराबाट मानिसमा यो भाइरस कसरी आयो ? भन्ने कुरा अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन